Wararka - Shirkadda 3LTEX ayaa kaqeyb gashay carwadda caalamiga ah ee Techtextile-Leading oo loogu talo galay dharka farsamada iyo kuwa aan soosaarayn
Shirkadda 3LTEX waxay kaqeybgashay carwada ganacsiga caalamiga ah ee Techtextile-Leading ee dharka farsamada iyo kuwa aan soosaarayn
Sannad kasta, shirkadda 3ltex waxay ka qaybqaadan doontaa Shiinaha ugu weyn iyo bandhigyo caalami ah oo la xiriira teknolojiyada, amniga iyo caafimaadka.
Techtextil oo ah carwada ganacsiga caalamiga ah ee horseedka u ah dharka farsamada iyo kuwa aan sooxirnayn, ayaa ku soo bandhigi doonta dhamaan noocyada kala duwan ee dharka farsamada, dharka dharka shaqeeya iyo teknoolojiyada dharka ee Techtextil. SmartTextiles - ama qalab caqli badan - ayaa adduunka dunta ah ku qaadaya duufaanno leh hoggaamiyeyaal warshadeed sida 3L oo soo saaraya alaabooyin cusub oo laga yaabo inay isbeddel ku sameeyaan warshadaha.
Waababka 3Ltex (naqshadeeyihii ugu dambeeyay iyo soo saaraha farsamada) ayaa soo bandhigay isbeddellada Shiinaha ee warshadaha dharka farsamada. Halkan ka baro wax badan oo ku saabsan dunta caqliga leh ee shirkadda 3ltex, dharka iyo hal-abuurnimada kale.
3LTEX si taxaddar leh ayaa loo diyaariyey, oo leh awood horumarineed oo wax soo saar xoog leh iyo heerar farsamo oo heer sare ah, farsamooyinkayaga sare ee casriga ah iyo maryaha casriga ah ayaa mar kale noqday kuwa ugu muhiimsan warshadaha.
Naqshadeynta xariifnimada iyo iskudhafka waxqabadka badan ee ka hortagga dabka, iska caabbinta heerkulka sare, kuleylka kuleylka, ku shaqeynta korantada, bakteeriyada iyo antistatic ayaa soo jiidatay macaamiil badan oo suurtagal ah inay joojiyaan, daawadaan oo ay gorgortamaan.
Macaamiil badan ayaa keenay dhibaatooyin farsamo oo soo food saaray intii hawshu socotay. Ka dib hagista farsamada iyo habsami u socodka injineerada tayada sare leh ee 3LTEX, macaamiil badan ayaa si weyn ugu qanacsan ujeedka iibsiga ayaa isla goobta lagu gaadhay
Tani waa iid warshadaha, laakiin sidoo kale waa safar goosasho ah. Bandhiggan, waxaan dib uga soo ceshannay amarro badan iyo fikrado qaali ah oo ka yimid isticmaaleyaasha dhammaadka iyo saaxiibbada ganacsadaha.
Sanadihii la soo dhaafay, 3LTEX waxay ku gaadhay horumar toosan iyo toosan dunta casriga ah iyo warshadaha dharka casriga ah, oo leh guulo wax ku ool ah, uruurinta nooc cayiman iyo horumar joogto ah.
Awoodda howlgalka suuqa wanaagsan, waxaan horey u soo qabannay goob muhiim u ah berrinka casriga ah iyo dharka casriga ah.
Xitaa iyadoo sidaas ah, waxaan ognahay in "ay jirto waddo dheer oo loo maro."
Waxaan sidoo kale sii wadi doonnaa inaan hagaajino nidaamka maamulka, dardar galino howlaha dhismaha calaamadda 3L, si caqli gal ah u wajahno baahida suuqa, iyo abuurista badeecooyin tayo sare leh si loogu adeego inta badan dadka isticmaala iyo asxaabta.